KMSpico Download လုပ် 11 ဖိုင်နယ် - Windows ကို 10 & Office ကို active 2018 [နောက်ဆုံး]
နေအိမ် » ရိုက်သံ & active » KMSpico 11 ဖိုင်နယ် 2018 အိတ်ဆောင် Windows နှင့် Office ကို Active
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2018
KMSpico 11 ပေးထားသောခလုတ်ကိုမှာအပြည့်အဝ Active နောက်ဆုံးဗားရှင်းအခမဲ့ download,. Download လုပ် Kmspico အားလုံး Microsoft က windows နှင့်ရုံးဗားရှင်းကိုသက်ဝင်စေဖို့ထှနှင့်နောက်ဆုံးပေါ် Active ဖြစ်ပါတယ်. ဒီ Kmspico လုပ်ငန်းများနှင့်, အသုံးပြုသူများကအားလုံးကို Windows ဗားရှင်းရုံးမှပြီးနောက် Windows XP ကိုလူအပေါင်းတို့က Microsoft Office ကိုဗားရှင်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏ကိုသက်ဝင်နိုင် 2007.
KMSPico အခမဲ့ Windows ကို 10 active
Latest KMSpico 11 Free Download for windows 10 is an astonishing software. It is easy to understandaway of using and installing. KMSpico Download isasoftware that enables your PC Windows withalicense. ကီလိုမီတာဒေသခံတစ်ဦး network ပေါ်မှာကွန်ပျူတာများကိုလှုံ့ဆျော. It also eliminating the need for individual computers to connect to Microsoft.
နောက်ဆုံးရကီလိုမီတာ Active ဒီလိုလုပ်ဖို့က client-server ကို topology ကိုအသုံးပြုသည်. Domain Name System အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (DNS ကို) သို့မဟုတ်တစ် static နဲ့ configuration ကို. ကီလိုမီတာ client ကို ကွန်ပျူတာများကိုနေရာချထားနိုင် ကီလိုမီတာအိမ်ရှင်ကွန်ပျူတာများ. ဝေးလံခေါင်သီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခေါ်ဆိုခအသုံးပြုခြင်းဖြင့် (RPC), client များသည်ကီလိုမီတာအိမ်ရှင်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကီလိုမီတာ. kmspico နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဆော့ဖ်ဝဲကို Windows အပြေးကြသည်ကွန်ပျူတာများတွင်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်ပါသည် 7, Windows Vista က, Windows Server 2003, Windows Server 2008, သို့မဟုတ် Windows Server ကို 2008 R2 လည်ပတ်မှုစနစ်များ.
ပြတင်းပေါက်အဘို့အ Active ကီလိုမီတာ 10 န့်အသတ် features နဲ့အားလုံးပြတင်းပေါက်နဲ့ Microsoft ရုံးများနှင့်အတူ updated ထားပြီး. အခမဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ Tool ကိုကြိုးစားပါ. KMSpico Download လုပ် 11 အစီအစဉ်နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်, တစ်ဦးအမြဲ-running ကီလိုမီတာ server ကိုနှင့်အခြားသောဖြစ်ပါတယ် Active သူ့ဟာသူ. ဆာဗာဟာ့ဒ်ဝဲဖေါ်ထုတ်နှင့် key အပေါ်အခြေခံပြီး PC ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်. အဆိုပါ client ကိုတိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲပေါင်းစပ်အကြောင်းလက်မှတ်များရှိပါတယ်. အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောသော့များ.
ပြည်တွင်းဖြစ်ကို install ထားတဲ့ဆာဗာထဲမှာ activation ရရှိသော. ပြတင်းပေါက်အဘို့အ kmspico Download 10 ဆော့ဖျဝဲဒါ့အပြင်လည်း TAP adapter ကိုမိတ်ဆက် (ဒါ့အပြင်ဥမင်လှိုင်ခေါင်း) သောစေအလုပ်ဖြစ်တယ် တူညီတဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်လာ အခြားတဦးဖြစ်. ဒီလိုမျိုး, ဒါကြောင့် Windows ကိုအောင်မြင်စွာ activate စေသည်.
ထိုသို့တရားဝင်အသုံးပြုမှုလည်းရှိပါတယ်နောက်ပိုင်း Microsoft ကတစ်ခုခုကဒီပြသနာကိုကျော်လွှားနိုင်စေရန်ပိတ်ပင်လို့မရပါဘူး. Microsoft ကရုံးများအတွက် KMSpico 2013 အလုံအလောက် programming နဲ့လည်းမှာ Windows ၏အဆင့်မြှင့်တင်နှင့်အတူအလုံအလောမတ်နိုင်ပါတယ် 10/ 8.1/ 8/7အားလုံး edition မှာ. Sactivator လည်း Daz က Windows Loader ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ. သင်၌စိတ်ဝင်စားလျှင် Daz က Windows Loader ကို အစား KMSPico Windows ကို 10 active.
KMSpico 11 အပြည့်အဝ Active Feature ကို & သော့ချက်များ
စစ်မှန်သောလိုင်စင်: ဤသည်ကို Activation သင်ပိုက်ဆံပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်ရ Microsoft ကလိုင်စင်အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်မည်သည့်ပြတင်းပေါက်မွမ်းမံမှုများကိုသုံးနိုင်သည်, အွန်လိုင်း apps များနှင့်, Microsoft ကတိုက်ရိုက်အကောင့်သို့မဟုတ် Microsoft ကထုတ်ပြန်တဲ့မဆိုကုန်ပစ္စည်း.
တစ်သက်တာ activation: Kmspico ဘို့တူသောရုံးတင်စစ်ဆေး activation software ကိုမဖြစ် 30 နေ့ရကျ, ဒီ activation အမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်. Such as You don’t need to repeat installation withinaperiod
အပြည့်အဝ updated: Kmspico activator is frequently maintain and update by team daz developers to keep the genuine Windows license without getting detect.
ထောက် 32 bit / 64 bit: KMSPico နှစ်ခုလုံးကို support 32 bit နဲ့ & 64-Microsoft က Windows နဲ့ Microsoft Office ၏ bit version များ.
100% သန့်ရှင်းသော: This Tool doesn’t contain any harmful viruses or threats. Such as it’s able to detect harmful viruses ad eliminate them.
လုံးဝအခမဲ့: သင်သည်သင်၏ Windows သို့မဟုတ် Microsoft က Office.This software ကို activate လုပ်ဖို့ပင်တစ်ပြားမှပေးဆောင်စရာမလိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်.
KMSpico Download လုပ်နည်း 11, နှင့် Install?
Locker / Button လေးထဲကနေ kmspico Download လုပ်.
သင်သည်မည်သည့်ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ပထမဦးစွာအားလုံးကို disable ၏ / သင်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆော့ဗ်ဝဲကိုပိတ်ထား.
ပေးထား Locker / ခလုတ်ကိုမှ kmspico_setup exe ကို Download လုပ်.
exe kmspico_setup Install, သင့်ရဲ့ antivirus ကိုအားလုံးအားပိတ်ပြီးသေချာအောင်.
အခုဆိုရင်သင် kmspico software ကိုအလိုအလျောက်နဲ့ run ဖို့ခဏစောင့်ပါရန်ရှိသည်.
သင့် system ကို restart လုပ်ပါ, နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပျော်မွေ့.
KMSpico Download လုပ် 11 ဖိုင်နယ် 2018 အိတ်ဆောင် Windows နှင့် Office ကို Active
← အခမဲ့ CleanMyMac 3.9.3 Cracked Wavepad အသံ Editor ကို 8 ရိုက်သံ →